Imizobo yememori yeempawu ezaziwayo kwisifundo esenziwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpawu zisetyenziselwa zimele inxenye yamaxabiso ebhrendi Kwaye ziyilelwe ngendlela yokuba sikwazi ukukhumbula ngokukhawuleza imveliso okanye inkonzo ethengiswa yinkampani ethile. I-logo kufuneka ikhunjulwe ngokulula engqondweni yomntu, ukuze enze isitampu sengqondo kwaye angayidibanisa ngokukhawuleza nale mveliso okanye inkonzo.
Indawo yewebhu ebizwa ngeSigns.com iqhube uvavanyo apho ithatha abantu abali-156 baseMelika kwaye ibacele umngeni ekuzobeni iilogo ezili-10 ezaziwayo iyure enesiqingatha. Banokuphethukela kwimemori yabo yokuzoba ngesandla ezinye zezona zinto zaziwayo njengeAdidas, iBurger King okanye i-Starbucks.
Baye bakhethwa Abantu baseMelika abali-156 abaphakathi kweminyaka engama-20 nama-70 ubudala ukuze ngeyure enesiqingatha bazobe ezo logo. Ngale ndlela, kuvavanyo lwenziwe ukubona isiphumo seelogo zeempawu ezaziwayo kuthi.
Phakathi kweelogo ezitsaliwe, ngokuqinisekileyo kukho abantu abazinikeleyo kwihlabathi loyilo, ngakumbi kuba kukho izinto ezenziwa kakuhle. Nangona into enomdla kukuba ukuphinda kwenziwe Ukuchaneka okukhulu, ezo zenziwe ngenkangeleko elula.
Ikwabetha kakhulu, kwaye oko kubonisa ukubaluleka kweli candelo kuyilo lwe logo kunye nexabiso elinokuxabisa ukuyenza kwasekuqaleni, ufana nabathathi-nxaxheba kolu phando uyikhumbule ngokugqibeleleyo imibala efanayo. Iipesenti ezingama-80 kuphela zikwazile ukusebenzisa imibala yelogo yenkampani.
Kucacile ukuba kulula ukukhumbula umbala kunemilo ngakumbi, kodwa kuyasebenza ukubonisa ukubaluleka kukhetho ngobulumko lwemibala yoyilo lwe logo yophawu. Kwaye nangona isifundo esenziwe sincinci kakhulu, kuluncedo kakhulu ukwazi isiphumo esineempawu zazo ezinabantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ILogos » Nantsi indlela abantu abayi-156 abazobe ngayo iilogo zodumo kwimemori